Ducati 10981198 အဆိုပါအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6358)
နေအိမ် → Ducati → Ducati 10981198 အဆိုပါအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်
20 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on Ducati 10981198 အဆိုပါအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်
For the Romance representative motorcycle manufacturer Ducati, အဆိုပါ 2007 launch of the 1098 superbike wasawatershed event. The new bike stunned the motorcycling world by.
Ducati 1098/1198: The Superbike Redefined. တွင် 2011 Ducati has innovations for your smartphone too. Ducati Performance accessories Ducati – the story.
The Ducati 1098/1198 series has been one of the most successful for Ducati. Ducati won the 2008,2011 Superbike World Championship with its 1098 R ကို.
Book – Ducati 1098 / 1198 – The Superbike Redefined. 978-1-935007-06-7. $39.95. Brush – Bug plus Tar Removing – by Brushtech. B258C. $6.99. Brush – Parts Cleaning – အားဖြင့်.
Ducati အထူးဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ 1098 R ကို
19.06.2015 | Comments Off on Ducati GA မော်တော်ဆိုင်ကယ်အာမခံ
ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စမတ် eScooter ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati 60 Ducati Desmosedici GP11 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Diavel Bajaj Discover Brammo Enertia Aprilia Mana 850 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Moto Guzzi 1000 Daytona Injection တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက်